Ny vondrom-piarahamonina HRE misy vondrona foko 54 any Vietnam - Tany masina amin'ny fianana Vietnam
Tizy HRE, antsoina koa Cham re, Chom, Kre ary Moi Luy, manana mponina 120,251 XNUMX, monina any amin'ny faritra andrefana indrindra ny ankamaroany Quang ngai1 ary Blnh Dinh2 Provinces. Ny fitenin'izy ireo dia an'ny Mon-Khmer3 vondrona ary akaikin'ny Xo-dang ary Fiteny Ba-na. Namboly vary mando aloha be izy ireo, ary mandroso ny teknikan'izy ireo amin'ny fambolena. Ny fiompiana no voalohany manome fanomezana ho an'ny lanonana ara-pivavahana. Ny omby koa dia entina misintona angadinomby sy rakes. Miorina tsara ny harona sy ny fanenomana, saingy nihena ny tenona tato anatin'ireo folo taona lasa.
Taloha, ny lehilahy dia nanao turbans, akanjo lava ary palitao lava-andilana na nijanona nitanjaka teo amin'ny andilana. Ny vavy dia nanao zipo sosotra roa sy lobaka misy sisin-damba dimy ary nandrakofana volo tamin'ny lohany. Samy mitafy volom-borona voaravaka volom-borona na volom-borona ny volony na lahy na vavy. Ankehitriny ny akanjo HRE ao amin'ny Fomban'ny Kinh fa ny saron-dohan'izy ireo dia mijanona tsy miova. Ny ankabeazan'ny vehivavy dia mbola manao zipo namboarina avy amin'ny rongony vita amin'ny indostrialy. Ny HRE dia tia manao vakana sy firavaka varahina / volafotsy. Samy nanao rojo vy na haba ny lahy sy ny vavy; ny vavy koa manao fehin-tanana ary kavina. Nomena ny fametrahana nify.
Ny HRE dia miaina ao anaty trano-tokontany, iray metatra ambonin'ny tany. Ny rindrina dia miposaka eo amin'ny tapany ambony; isaky ny faran'ny tampon-trano dia voaravaka tandroka biby roa. Amin'ny faran'ny roa amin'ny gorodona dia misy toerana roa; tafasaraka amin'ny Atitany iray ho an'ny lehilahy handray vahiny ary ny iray ho an'ny vehivavy.
Manana toerana ambony ny sefom-pokontany ary manana andraikitra lehibe. Teo aloha, ny olona Hre rehetra dia naka ny anaran'ny fianakaviana lapan'ny. Vao tsy ela akory izay, ny sasany naka Nguyen, Ha ary Pham toy ny anaran'ny fianakaviany. Ny endrika fianakaviana nokleary kely dia malaza tokoa.
Ny HRE dia mino ny polytheism ary manompo fanahy samihafa.
Isan-taona, ny HRE koa dia manao lanonana famonoana ombidia toy ireo foko hafa ao amin'ny Truong Son Range ary Central Highlands. Tian'izy ireo ny mamorona andininy, mihira ary mitendry mozika maro karazana4 fitaovana. Ka-Choi ary Ka-Leu dia mozika roa malaza. Ny tantaran'izy ireo taloha momba ny fitiavana mahatoky sy ny fifandirana tsara-ratsy dia tena manintona. Anisan'izany ny zavamaneno renirano, ching Ka-la, ling-la (sodina tranversal), ta-Lia (sodina lava), Bo-fa ho an'ny vehivavy, ra-Val pan-sodina, ra-ngoi, po-pen sy amponga. Ny sombin-kira 3 na 5 no tononkira samy hafa sarobidy indrindra.
Trano mitafo HRE any amin'ny faritanin'i Binh Dinh (Loharano: Mpanonta VNA)
(Visited 1,723 fotoana, 7 fitsidihana amin'izao fotoana izao)
← Ny vondrom-piarahamonina H'MONG misy vondrom-poko 54 ao Vietnam
Ny vondrom-piarahamonina RO MAM misy vondrom-poko etnik 54 any Vietnam →
Fiteny VIETNAMESE ho an'ny Vietnamese sy ny vahiny… (5,357)
Miaramila sy basy (3,269)
Fitsidihana anio: 350
Andro farany 7 nitsidika: 2,325
Total visits: 420,576